सांसद अपहरण गर्ने महेश बस्नेत र किसन श्रेष्ठलाई २४ बर्ष जेल — Motivatenews.Com
सांसद अपहरण गर्ने महेश बस्नेत र किसन श्रेष्ठलाई २४ बर्ष जेल
काठमाडौं – समाजवादी पार्टीका सांसद डा. सुरेन्द्र यादवको अपहरणबारेको जाहेरी प्रहरीले दर्ता गर्ने भएको छ । काठमाडौं प्रहरीले कार्यक्षेत्र नपरेको भन्दै आइतबार जाहेरी दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको प्रहरीले महोत्तरीमा जाहेरी दर्ता गर्ने भएको छ ।
सांसद यादवले सांसदद्वय महेश बस्नेत, किसन श्रेष्ठ तथा पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालविरुद्ध आइतबार किटानी जाहेरी दिएका थिए । तर, काठमाडौं प्रहरीले महोत्तरी प्रहरीको कार्यक्षेत्र भन्दै जाहेरी दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको थियो ।
प्रहरी महानिरीक्षक ठाकुर ज्ञवालीले यो घटनाको जाहेरी प्रहरीले दर्ता गर्ने बताए छन् । उनले भने, ‘स्थानीय प्रहरी कार्यालयको आ–आफ्नो कार्यक्षेत्र हुन्छ । कार्यक्षेत्र बाहिर भएर जाहेरी दर्ता नभएको हुनसक्छ । कार्यक्षेत्र महोत्तरीमा पर्ने प्रहरी कार्यालयमा जाँदा जाहेरी दर्ता हुन्छ । जाहेरी दर्ता नभएपनि कानूनी उपचारको व्यवस्था छ ।’ जाहेरी दर्ता नगरेको भनेर प्रहरी आलोचित भएपछि दर्ता गर्ने पक्षमा प्रहरी नेतृत्व पुगेको स्रोत बताउँछ ।
२४ बर्ष कैद सजाए माग
डा. सुरेन्द्र यादवले अपहरण तथा शरीर बन्धकको अभियोगमा सांसदहरू महेश बस्नेत, किसन भनिने कृष्णकुमार श्रेष्ठ र पूर्वआइजिपी सर्वेन्द्र खनालविरुद्ध किटानी जाहेरी दिन खोजेका छन् । तीनमध्ये दुईजना सांसद अर्थात् सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति भएकाले साढे २४ वर्षसम्म कैद सजायको माग गरिएको छ ।
डा. यादवले ‘मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को परिच्छेद १७ को दफा २११ को १,२, को (क) (ख), २१२ (१)(२) (३) र २१३, २१४(१) (२) (३), २१५, २१७ बमोजिम क्षतिपूर्तिसमेत भराई शरीर बन्धक लिई अपहरणको कसुर गरेकोले निजहरूलाई हदैसम्मको कानुनी कारबाहीसमेत गरिपाऊँ,’ भनी किटानी गरेका छन् ।
दफा २१४(१) अनुसारको अपहरणको कसुरमा १० वर्षदेखि १५ वर्षसम्म कैद र एक लाखदेखि एक लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने प्रावाधान छ । सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई ५० प्रतिशत कैद थप हुने प्रावधान भएकाले दुई सांसदका लागि यो प्रावधान आकर्षित हुन्छ । दफा २१४ कै उपदफा ३ मा संगठित रूपमा कसुर गरेमा थप दुई वर्ष कैद सजाय हुने व्यवस्था छ । जसअनुसार सांसदलाई साढे २४ वर्ष तथा पूर्वआइजिपी १७ वर्षसम्म कैद सजाय माग गरी जाहेरी दिइएको छ ।
दफा २११ (क) भन्छ : कुनै व्यक्तिलाई बल प्रयोग गरी वा सो प्रयोग गर्ने धम्की दिई, छलकपट गरी वा डरत्रासमा पारी, जोर जुलुम गरी, हातहतियार देखाई वा नदेखाई वा झुक्यानमा पारी वा नशालु पदार्थ वा मादक पदार्थ सेवन गराई वा कुनै व्यक्ति यात्रा गरिरहेको सवारीसाधन कुनै किसिमले कब्जा वा नियन्त्रणमा लिई वा त्यसउपर कुनै किसिमले नियन्त्रण गरी निजलाई कुनै ठाउँमा लगेमा वा जान बाध्य गराएमा अपहरण गरेको मानिनेछ ।
दफा २१३ भन्छ : प्रचलित कानुनबमोजिम कसुर हुने अन्य कुनै काम गर्न लगाउने उद्देश्यले दफा २११ वा २१२ बमोजिमको काम गरे वा गराएको भए सात वर्षदेखि दश वर्षसम्म कैद र सत्तरी हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना र त्यसबाहेक अन्य उद्देश्यले गरे वा गराएको भए तीन वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद र ३० हजारदेखि पचास हजार रुपैयाँँसम्म जरिवाना हुनेछ ।
दफा २१४ भन्छ : थप सजाय हुनेः (१) दफा २११ बमोजिम अपहरण गरी दफा २१२ बमोजिम शरीर बन्धक लिने व्यक्तिलाई दश वर्षदेखि पन्ध्र वर्षसम्म कैद र एक लाखदेखि एक लाख पचास हजार रुपैयाँंसम्म जरिवाना हुनेछ ।
(२) कसैले अपहरण गरी वा शरीर बन्धक लिई यस संहिता वा कानुनबमोजिम कसुर मानिने अन्य कुनै काम गरेको रहेछ भने निजलाई त्यस्तो कसुरबापतको सजायमा उपदफा (१) बमोजिमको सजाय थप हुनेछ ।